Ruushku wuxuu u baahan yahay dad uu ku beero dhulkiisa faaruqa ah: BUUTIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ruushku wuxuu u baahan yahay dad uu ku beero dhulkiisa faaruqa ah: BUUTIN
Madaxweynaha Ruushka ayaa walaac xoogan ka muujiyay dad la’aan haysata. Ruushka ayaa ah dalka adduunka ugu weyn waxana jirta dhul baaxadleh oo ayna jirin cid ku nool. Waxay walaac ka qabaa sidii loo waardiayn lahaa dhulkaas.
Dhul dhan oo waxa jira baraf ah qaasatan xadka barafka ee ay wadaagaan Maraykanka. ”Waxaan u baahanahay dad badan oo aan ku beerno dhulka ayuu yiri Buutin. Mark aan eegno xaaladaha taagan dhul intaa leeg iyo tirada dadkeena oo ah 146 milyan am hayno tiro aan ku buuxino dhulkeena sidaa u balaadhan ayuu raaciyay.
Ruushka ayaa sheegay in hargabka Karoona uu aad u sii yareeyay tirada dalkaasi oo markii horeba ahaa 147 milyan. ”Waxa taas nooga sii daran in dalku haysanba awoodii shaqaalaha ee dalka lagu wadi lahaa.
”Waxa dalka hadda shaqaynaya ama jooga da’ada shaqada 81 milyan haddii aynu rabno in dalkani aduunka la tartamo waa inaan tiradaas aad u kordhinaa ayuu ku calaacalay Buutin.
Soamaliya oo ay aadu yar yihiin dadka da’da ah ayaa haysata dhalinyar xoogan oo aan laga faaiideysan inta badana ku dhinta dagaalo qabiliya oo ay u dambeysay Butlaan.
Dalalka gaalada ayaa ku dhow inay gebi ahaanba kori waayaan maadaam aanu jirin dhalinti shaqayn lahayd.